Varombo Vatengi Sevhisi iri Kukuvadza Yako Kushambadzira ROI | Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 9, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Jitbit, chikuva chekubatsira, chakaburitsa iyi infographic ine manhamba ayo anonyatso penda mufananidzo kukanganisa kwehurombo hwevatengi pane bhizinesi. Makambani anoenderera nekubata varombo sevatengi sezvavakaita makore apfuura… apo vatengi vaingogunun'una kune bhizinesi kana kune diki diki shamwari. Asi handicho chokwadi chenyika yatiri kurarama mairi.
Vatengi vane hasha mhondi dzakanyarara
Basa rakashata revatengi rinokanganisa mukurumbira wechiratidzo chako online uye zvinokanganisa kudzoka kwako kwekushambadzira pane kudyara. Kana iwe uine peji rezvigadzirwa pamhepo iro rakazara nehurombo wongororo pasi paro, vangangove vatengi vanozoenda kure. Muchokwadi, 86% yevashanyi havazotenge kubva kune imwe kambani ine isina kunaka ongororo.
Kuti uvandudze vatengi vako zvakanyanya, JitBit inokurudzira kuti makambani avandudze kudyidzana pakati pevashandi vevashandi nevatengi, vape kudzidziswa kuri nani kuti vadzivise vashandi vasingakwanise, uye vape ruzivo rwunowirirana munzira dzese dzevatengi - dzinosanganisira zvese nhare, email, hurukuro yepamoyo, maforamu . Ivo vanojekesa iyo 11 Nzira Dzakaipa Vatengi Sevhisi iri Kupisa Yako Pazasi Mutsara mune yavo posvo:
Inaccessibility - mabhizinesi anoda kuwanikwa uye kupindura munzira dzese.
havukavu - hapana chinogumbura mutengi sekumirira rubatsiro.
ruzivo - vamiririri vebasa vasingakwanise kubatsira havapfuuri nekushungurudzika.
Arguments - kuyedza kuhwina kurwa kunosundira mabhizinesi kurasikirwa muhondo.
Promises - kutyora zvipikirwa kunotyora kuvimba, uye hafu yemakambani ese inoputsa zvivimbiso.
Records - kudzokorora kufona uye kutsanangura dambudziko kwese kwese nguva dzinoita vatengi nzungu.
Personalization - kusaziva kuti mutengi wako ndiani, kukosha kwavo, hunyanzvi hwavo, uye zvavanotarisira zvinosiya makambani kumashure.
Kuteerera - kudzokorora dambudziko nekudzokorora hakuna basa uye kunodzikisira mitengo yekugutsikana.
Kutevera Kumusoro - paunoti uchazotevera, tevera.
Vashandi Vakaipa - kunyangwe zuva rakaipa sei revashandi vako, hapana chikonzero chekuzviburitsa pane mutengi anotevera.
Mhanya Kwose Kwose - kuendeswa uye kunonoka pasina chisarudzo ndicho chinhu chakaipisisa chaungaite kumutengi.
Icho chinonyanya kukosha cheiyi infographic? Na 2020, vatengi vanoziva ichawana mutengo uye chigadzirwa se anokosha musiyano wechiratidzo. Mazhinji mhando aripo kare, mumaonero angu. Mabhizinesi ari kudzidza kuti vatengi vasingagutsikane havawanzo kudzoka, vazhinji havazomboshandisa kambani zvakare. Wedzera icho pamwe nekuti vatengi vasina kugutsikana vanogona kugovana zvavo kushushikana kwavo online, uye bhizinesi rako riri kunanga kune dambudziko kana usiri kupindura nekugadzirisa matambudziko ari kutaurwa. Makambani mazhinji anotora sevhisi seyakashata yakaipa kana ivo vachifanira kunge vachiisa mari mairi sekusiyanisa kubva kune vavanokwikwidza.
Tags: basa rakaipa revatengivatengi vanozivaMabatiro evatengivatenginhamba dzevashandiHelpdeskinfographicjitbitwongororo dzisina kunakakusashanda zvakanaka kwevatengiReviewsRoyi
Iyo Yakanakisa Nzira Yekutarisira Akawanda Twitter Maakaundi